निश्चलको 'दुई रूपैयाँ' भदौ २३ मा रिलिज हुने
सेतोपाटी, काठमाडौं, चैत ७ print
निर्देशक असिम शाह निर्देशन रहने एवं ए जि टु वान प्रडक्सन प्रा. लि. तथा ब्ल्याक हर्स पिक्चर्सको संयुक्त निर्माण रहने '२ रुपैयाँ'ले रिलिज मिति तोकेको छ।
फिल्मका निर्माता एवं अभिनेता निश्चल बस्नेतले फेसबुक स्टाटसबाट फिल्मको रिलिज मिति घोषणा गरेका हुन्। फिल्म भदौ २३ गते रिलिज हुनेछ।
फिल्ममा आशिफ शाह तथा निश्चल बस्नेतको प्रमुख भूमिका रहनेछ। यी दुईका अलावा कलाकारहरू बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा, प्रमोद अग्रहरी, मेनुका प्रधान, राजन ईशान, प्रतीकराज न्यौपाने, टिका पहारी, आदिको प्रमुख भूमिका रहनेछ ।
फिल्मका कथाकार आशिफ शाह हुन्। '२ रुपैयाँ'मा शिवराम श्रेष्ठको छायाँकन रहनेछ। फिल्मको हाल छायाँकन चलिरहेको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ७, २०७३ ०९:१६:५७